BOOSAASO, Puntland – Maxkamadda Ciidamadda Puntland ee gobolada Bari, Karkaar, Sanaag, Haylaan iyo Gardafuu ayaa Sabtida maanta ah waxay xukuno isugu jira dil toogasho iyo xabsi ay ku riday shan eedeysane.
Shaqsiyaadkan kasoo kala jeeda Koonfur Galbeed iyo Jubaland ayaa lagu soo eedeeyay in ay la shaqeynayeen kooxaha argagixisada ah.
Dacwad-oogeyaasha ayaa u sheegay xeer-beegtada in shaqsiyaadkan ay guriyahooda uga soo tageen "in ay laayaan shacabka Puntland, una socdeen in ay howlgao kasoo fuliyaan magaaladda Gaalkacyo".
Maxamuud Maxamed Saciid loo garan og-yahay Kabtan Boorash, oo 36-jir ah, ayaa lagu xukumay dil toogasho markii lagu helay dambiga.
Xasan Moosow Cali [Ibraahim], 17-sano jir, Cabdikariin Cali Maxamed [Cabdishakuur], 18-jir iyo Xuseen Cabduqaadir Maxamed [Shaafici], 16-jir, ayaa midkiiba waxaa lagu xukumay min 20 sano oo xarig ah.
Cabdiqafaar Saciid Yuusuf Aadan [Xasan Yare], oo 22 jir ah kuna dhashay magaaladda Kismaayo, ayaa lagu xukumay 15-sano oo xabsi ah.
Ibraahim Bile Maxamuud, gudoomiyaha Maxkamada ciidamada shanta gobol oo xukunka kaga dhawaaqay Boosaaso, ayaa xusay in xukumaneyaasha ay haystaan muddo 30 casho ah oo rafcaan qaadasho ah.
Al-Shabaab iyo Daacish ayaa si dhuumaaleysi ah uga howlgala qaybo kamid ah gobolka Bari, halkaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku baacsanayeen ciidamadda ammaanka iyo dhigooda saaxiibadda caalamiga ah.
Qarax khasaaro sababay oo ka dhacay duleedka Boosaaso
Puntland 30.01.2018. 17:47
Qaraxan ayaa ahaa mid culus oo laga maqlay meelo ka fog goobta...
Gallan: Dhaqaalaha ugu badan ayaa lagu bixinayaa amniga Boosaaso
Soomaliya 28.03.2019. 20:56
Wararkii ugu dambeeyay dilka Muwaadiniinta Itoobiya ee Boosaaso
Puntland 02.10.2018. 17:24
Dowladda Puntland oo xayiraad kusoo rogtay doonyaha kalluumeysiga
Puntland 08.03.2020. 07:08
Taliye boolis oo lagu dhaawacay weerar ka dhacay Boosaaso
Puntland 14.02.2020. 16:13
Dooni xoolo u sida Imaaraadka Carabta oo ka shareecatay Boosaaso
Puntland 06.11.2019. 10:47
Puntland oo baahineysa warbixinta baaritaanka dilka maamulihii P&O
Puntland 24.07.2019. 07:20